နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport အကြောင်းသိကောင်းစရာများ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 3:16 AM နည်းပညာဗဟုသုတ, နည်းလမ်းများ
၁။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်း။ Check Your Passports’s Validityသင် ပြည်ပခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိလျှင် သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်းကို အရင်စစ်ဆေးပါ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်းသည် အနည်းဆုံး ၆ လအထက်တွင် ရှိရပါမည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်း ၆လထက်နည်းလျှင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိမှ သင့်အား လေယာဉ်ပေါ်သို့ပေးတက်မည်မဟုတ်ပါ။
၂။ ဗီဇာ။ Find Out If You NeedaVisa
သင် ပြည်ပခရီးသွားဖို့ စီစဉ်ထားလျှင် သွားမည့်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဗီဇာ လို ၊ မလို သက်ဆိုင်ရာသံရုံးများတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအနက်မှ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဗီဇာမလိုသောနိုင်ငံများမှာ
၁ ထိုင်းနိုင်ငံ (Thailand) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၂ စင်္ကာပူနိုင်ငံ (Singapore) ၃၀ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၃ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ (Brunei) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၄ ကမ္ဗောဒီးယားနိုင်ငံ (Cambodia) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၅ လာအိုနိုင်ငံ (Laos) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၆ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ (Vietnam) ၁၄ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၇ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ (Indonesia) ၃၀ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၈ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ (Phillippines) ၃၀ ရက်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်
၃။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport စာရွက်အလွတ်။ Check Your Blank Passport Pages
သင် ပြည်ပခရီးမထွက်ခင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport စာအုပ်တွင် စာရွက်အလွတ် ကျန် ၊ မကျန် အရင်စစ်ဆေးပါ။ စာရွက်အလွတ် မကျန်ပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport စာအုပ်အသစ်လုပ်ပြီး မှခရီးထွက်ပါ။
၄။ အနောက်ဘက်/ကျောဘက် အိတ်ထဲတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport ကို မထည့်ပါနှင့်။ Don’t Ever Put Your Passport in Your Back Pocket
ခရီးထွက်ရာတွင် သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport ကို အနောက်ဘက်/ကျောဘက် အိတ်ထဲသို့ ထည့်ရန်မသင့်ပါ။ မတော်တဆအောက်သို့ ပြုတ်ကျခြင်း/ခါးပိုက်နှိုက်ခြင်းများကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport နှင့်အခြားအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများကို အရှေ့ဘက်အိတ်ထဲတွင် ထားခြင်းသာ ဘေးအကင်းဆုံးပါ။
၅။ ၂ချါပန္စစ္ပါ။ Always Look Twice
Taxi စီးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ စားသောက်ဆိုင်တွင်စားပြီးသော်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဟိုတယ်အခန်းတွင်သော်လည်းကောင်း၊ သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport ပါ၊ မပါ အမြဲတမ်း ၂ခါလောက်ပြန်စစ်ပါ။
၆။ အုပ်စုလိုက် ခရီးသွားလျှင်။ Group Travelling
မိသားစုနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ သူငယ်ချင်းအုပ်စုများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ခရီးသွားလျှင် သင်သည် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ Departure/ Arrival/Custom forms များဖြည့်ပါက ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် တစ်ဦးချင်းစီရဲ့နာမည်၊ မွေးနေ့၊ Passport Number ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport စထုတ်တဲ့နေ့၊ ကုန်ဆုံးတဲ့နေ့များကို စာရွက်လေးဖြင့် Note ထုတ်ထားပါ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport များကိုအိတ်ထဲမှသွင်းလိုက်၊ ထုတ်လိုက် လုပ်ရန် မလိုတော့ဘဲအချိန်ကုန်သက်သာပြီး ဘေးလည်းကင်းစေပါသည်။
၇။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport ပျောက်ဆုံးခြင်း။ Lost your Passport
သင်အိမ်မှမထွက်ခင် သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport နှင့် အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများကို မိတ္တူကူးထားပါ။ ပိုပြီးစိတ်ချရအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပြီး မိမိ၏ဖုန်းထဲတွင်ဆောင်ထားပါ။ (သို့မဟုတ်) e-mail ထဲတွင်သိမ်းထားပါ။ အကယ်၍သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်မတော်တဆ ပျောက်ဆုံးသွားပါက မိမိနိုင်ငံ၏သံရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်သွားပါ။ သံရုံးမှသက်ဆိုင်ရာအရာရှိများ၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာပါ။ သံရုံးများသည် များသောအားဖြင့် အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာမြို့ (သို့) အဓိကမြို့များတွင်ရှိတတ်သည်ကို အထူးသတိပြုပါ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် သံရုံးများပိတ်သည်ကိုလည်းအထူးသတိပြုပါ။
ကျွန်​​တော်​တို့ မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ နိုင်​ငံကူးလက်​မှတ်​ အမျိုးအစား(Types) (၉ )မျိုးဖြင့်​ ပြုလုပ်​​ပေးလျှက်​ရှိပါတယ်​။
အမျိုးအစား( ၉) မျိုးဆိုတာက PB,PT,PJ,PR,PS,PE,PV,PD နဲ့ PO ဆိုပြီး ထုတ်​​​ပေးပါတယ်​။
၁. PB = Business Passport.
ပြည်ပသို့စီးပွားရေး အရ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့်နိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသော စာအုပ်အမျိုးအစား
၂. PT = Dependent Passport ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်နေသော ခင်ပွန်း/ဇနီး နှင့် လိုက်ပါနေထိုင်သော မှီခို နိုင်ငံသားအားထုတ်ပေးသောစာအုပ်အမျိုးအစား
၃. PJ = Job Passport ပြည်ပမှာ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သော နိုင်ငံသားများ ကို ထုတ်ပေးသော စာအုပ် အမျိုးအစား
၄. PR = Religirous Passport.
ပြည်ပသို့ သာသနာရေး ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သတ်သော နိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်စာအုပ်အမျိုးအစား
၅. PS = Seaman Passport.
ပြည်ပသို့ သဘောင်္သား ပင်လယ်ခရီးနှင့်ပတ်သတ်သောနိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသောစာအုပ်အမျိုးအစား
၆. PE = Student Passport.
ပြည်ပသို့ ကျောင်းသား ပညာတော်သင် နိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်စာအုပ်အမျိုးစား
၇. PV = Visit Passport.
ပြည်ပသို့ အလည်အပတ် short visit ခရီးတို အလည်အပတ်နိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်စာအုပ်အမျိုးအစား
၈. PD = Diplomatic Passport.
ပြည်ပသို့ သံတမန်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သတ်သောနိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်အမျိုအစား
၉. PO = Official Passport.
ပြည်ပသို့ အရာရှိ နိုင်ငံတော်အရေးအရာနှင့်ပတ်သတ်သောနိုင်ငံသားများအားထုတ်ပေးသည့်စာအုပ်အမျိုးအစား
အထက်ပါ ပတ်စပို့တ် များကို အရောင်သုံးမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်
၁ / အနီရောင်
နိုင်ငံသူ/သား သာမန် ပြည်သူလူထုအတွက်.
၂ / အပြာရောင်
နိုင်ငံရေး သံတမန်ကိစ္စနှင့် အပ်နှင်းခံရသူနိုင်ငံသားများအတွက်.
အစိုးရရုံး နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံသားများအတွက် ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒါ့​ကြောင့်​ နိုင်​ငံကူးလက်​မှတ်​(passport)ပြုလုပ်​မည်​ဆိုပါက မိမိဟာ ဘုရားဖူးသွားမှာလား၊အလုပ်​နဲ့သွားမှာလား၊အလည်​အပတ်​လား စသည်​ဖြင့်​(type)အမျိုးအစားကို မှန်​ကန်​​​အောင်​ရွေးချယ်​တတ်​ဖို့လိုပါတယ်​။
ပျော်ရွှင် ဘေးကင်းသော ခရီးစဉ်ဖြစ်စေကြောင်း ဆန္ဒပြုလျှက်
နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport အကွောငျးသိကောငျးစရာမြား
၁။ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport သကျတမျး။ Check Your Passports’s Validity
သငျ ပွညျပခရီးသှားဖို့ အစီအစဉျရှိလြှငျ သငျ၏ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport သကျတမျးကို အရငျစဈဆေးပါ။ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport သကျတမျးသညျ အနညျးဆုံး ၆ လအထကျတှငျ ရှိရပါမညျ။ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport သကျတမျး ၆လထကျနညျးလြှငျ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးအရာရှိမှ သငျ့အား လယောဉျပျေါသို့ပေးတကျမညျမဟုတျပါ။
သငျ ပွညျပခရီးသှားဖို့ စီစဉျထားလြှငျ သှားမညျ့နိုငျငံသညျ မွနျမာနိုငျငံသားမြားအတှကျ ဗီဇာ လို ၊ မလို သကျဆိုငျရာသံရုံးမြားတှငျ စုံစမျးနိုငျပါသညျ။
အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံမြားအနကျမှ မွနျမာနိုငျငံသားမြားအတှကျ ဗီဇာမလိုသောနိုငျငံမြားမှာ
၁ ထိုငျးနိုငျငံ (Thailand) ၁၄ ရကျဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့
၂ စင်ျကာပူနိုငျငံ (Singapore) ၃၀ ရကျဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့
၃ ဘရူနိုငျးနိုငျငံ (Brunei) ၁၄ ရကျဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့
၄ ကမ်ဗောဒီးယားနိုငျငံ (Cambodia) ၁၄ ရကျဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့
၅ လာအိုနိုငျငံ (Laos) ၁၄ ရကျဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့
၆ ဗီယကျနမျနိုငျငံ (Vietnam) ၁၄ ရကျဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့
၇ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ (Indonesia) ၃၀ ရကျဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့
၈ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ (Phillippines) ၃၀ ရကျဗီဇာ ကငျးလှတျခှငျ့
၃။ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport စာရှကျအလှတျ။ Check Your Blank Passport Pages
သငျ ပွညျပခရီးမထှကျခငျ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport စာအုပျတှငျ စာရှကျအလှတျ ကနျြ ၊ မကနျြ အရငျစဈဆေးပါ။ စာရှကျအလှတျ မကနျြပါက နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport စာအုပျအသဈလုပျပွီး မှခရီးထှကျပါ။
၄။ အနောကျဘကျ/ကြောဘကျ အိတျထဲတှငျ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport ကို မထညျ့ပါနှငျ့။ Don’t Ever Put Your Passport in Your Back Pocket
ခရီးထှကျရာတှငျ သငျ၏ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport ကို အနောကျဘကျ/ကြောဘကျ အိတျထဲသို့ ထညျ့ရနျမသငျ့ပါ။ မတျောတဆအောကျသို့ ပွုတျကခြွငျး/ခါးပိုကျနှိုကျခွငျးမြားကွုံတှနေို့ငျပါသညျ။ သငျ၏ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport နှငျ့အခွားအရေးကွီးစာရှကျစာတမျးမြားကို အရှဘေ့ကျအိတျထဲတှငျ ထားခွငျးသာ ဘေးအကငျးဆုံးပါ။
၅။ ၂ခါ ပွနျစဈပါ။ Always Look Twice
Taxi စီးလြှငျသျောလညျးကောငျး၊ စားသောကျဆိုငျတှငျစားပွီးသျောလညျးကောငျး၊ လယောဉျပျေါတှငျလညျးကောငျး၊ ဟိုတယျအခနျးတှငျသျောလညျးကောငျး၊ သငျ၏ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport ပါ၊ မပါ အမွဲတမျး ၂ခါလောကျပွနျစဈပါ။
၆။ အုပျစုလိုကျ ခရီးသှားလြှငျ။ Group Travelling
မိသားစုနှငျ့သျောလညျးကောငျး၊ သူငယျခငျြးအုပျစုမြားနှငျ့သျောလညျးကောငျး၊ ခရီးသှားလြှငျ သငျသညျ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျဖွဈသညျဆိုပါစို့။ Departure/ Arrival/Custom forms မြားဖွညျ့ပါက ပိုမိုလှယျကူစရေနျ တဈဦးခငျြးစီရဲ့နာမညျ၊ မှေးနေ့၊ Passport Number ၊ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport စထုတျတဲ့နေ့၊ ကုနျဆုံးတဲ့နမြေ့ားကို စာရှကျလေးဖွငျ့ Note ထုတျထားပါ။ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport မြားကိုအိတျထဲမှသှငျးလိုကျ၊ ထုတျလိုကျ လုပျရနျ မလိုတော့ဘဲအခြိနျကုနျသကျသာပွီး ဘေးလညျးကငျးစပေါသညျ။
၇။ ပွညျပနိုငျငံမြားတှငျ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport ပြောကျဆုံးခွငျး။ Lost your Passport
သငျအိမျမှမထှကျခငျ သငျ၏ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport နှငျ့ အရေးကွီးစာရှကျစာတမျးမြားကို မိတ်တူကူးထားပါ။ ပိုပွီးစိတျခရြအောငျ ဓါတျပုံရိုကျထားပွီး မိမိ၏ဖုနျးထဲတှငျဆောငျထားပါ။ (သို့မဟုတျ) e-mail ထဲတှငျသိမျးထားပါ။ အကယျ၍သငျ၏ နိုငျငံကူးလကျမှတျ ပတျဈပို့ Passport ပွညျပနိုငျငံမြားတှငျမတျောတဆ ပြောကျဆုံးသှားပါက မိမိနိုငျငံ၏သံရုံးသို့ လူကိုယျတိုငျရောကျအောငျသှားပါ။ သံရုံးမှသကျဆိုငျရာအရာရှိမြား၏ ညှနျကွားခကျြမြားအတိုငျး လိုကျနာပါ။ သံရုံးမြားသညျ မြားသောအားဖွငျ့ အစိုးရ ရုံးစိုကျရာမွို့ (သို့) အဓိကမွို့မြားတှငျရှိတတျသညျကို အထူးသတိပွုပါ။ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ နှငျ့ အစိုးရရုံးပိတျရကျမြားတှငျ သံရုံးမြားပိတျသညျကိုလညျးအထူးသတိပွုပါ။
ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ နိုငျငံကူးလကျမှတျ အမြိုးအစား(Types) (၉ )မြိုးဖွငျ့ ပွုလုပျပေးလြှကျရှိပါတယျ။
အမြိုးအစား( ၉) မြိုးဆိုတာက PB,PT,PJ,PR,PS,PE,PV,PD နဲ့ PO ဆိုပွီး ထုတျပေးပါတယျ။
ပွညျပသို့စီးပှားရေး အရ သှားရောကျလုပျကိုငျမညျ့နိုငျငံသားမြားအားထုတျပေးသော စာအုပျအမြိုးအစား
၂. PT = Dependent Passport ပွညျပတှငျ အလုပျလုပျနသေော ခငျပှနျး/ဇနီး နှငျ့ လိုကျပါနထေိုငျသော မှီခို နိုငျငံသားအားထုတျပေးသောစာအုပျအမြိုးအစား
၃. PJ = Job Passport ပွညျပမှာ တရားဝငျ အလုပျလုပျကိုငျသော နိုငျငံသားမြား ကို ထုတျပေးသော စာအုပျ အမြိုးအစား
ပွညျပသို့ သာသနာရေး ဘာသာရေးနှငျ့ ပတျသတျသော နိုငျငံသားမြားအားထုတျပေးသညျ့စာအုပျအမြိုးအစား
ပွညျပသို့ သဘောင်ျသား ပငျလယျခရီးနှငျ့ပတျသတျသောနိုငျငံသားမြားအားထုတျပေးသောစာအုပျအမြိုးအစား
ပွညျပသို့ ကြောငျးသား ပညာတျောသငျ နိုငျငံသားမြားအားထုတျပေးသညျ့စာအုပျအမြိုးစား
ပွညျပသို့ အလညျအပတျ short visit ခရီးတို အလညျအပတျနိုငျငံသားမြားအားထုတျပေးသညျ့စာအုပျအမြိုးအစား
ပွညျပသို့ သံတမနျရေးရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ပတျသတျသောနိုငျငံသားမြားအားထုတျပေးသညျ့အမြိုအစား
ပွညျပသို့ အရာရှိ နိုငျငံတျောအရေးအရာနှငျ့ပတျသတျသောနိုငျငံသားမြားအားထုတျပေးသညျ့စာအုပျအမြိုးအစား
အထကျပါ ပတျစပို့တျ မြားကို အရောငျသုံးမြိုးခှဲခွားထားပါတယျ
၁ / အနီရောငျ
နိုငျငံသူ/သား သာမနျ ပွညျသူလူထုအတှကျ.
၂ / အပွာရောငျ
နိုငျငံရေး သံတမနျကိစ်စနှငျ့ အပျနှငျးခံရသူနိုငျငံသားမြားအတှကျ.
အစိုးရရုံး နိုငျငံတျောအကွီးအကဲ အုပျခြုပျမှုပိုငျးဆိုငျရာနိုငျငံသားမြားအတှကျ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ နိုငျငံကူးလကျမှတျ(passport)ပွုလုပျမညျဆိုပါက မိမိဟာ ဘုရားဖူးသှားမှာလား၊အလုပျနဲ့သှားမှာလား၊အလညျအပတျလား စသညျဖွငျ့(type)အမြိုးအစားကို မှနျကနျအောငျရှေးခယျြတတျဖို့လိုပါတယျ။
ပြျောရှငျ ဘေးကငျးသော ခရီးစဉျဖွဈစကွေောငျး ဆန်ဒပွုလြှကျ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport အကြောင်းသိကောင်းစရာများ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:16 AM Rating:5[Zawgyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် ၁။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ Passport သက်တမ်း။ Check Your Passports’s Validityသင် ပြည်ပခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိလျှင...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:16 AM
ကွန်ပြူတာ သုံးရင် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အချက်တွေ